Jadeecada oo `laga cirribtiray` meeshii ugu darneyd adduunka ee ay ka dillaacday - Somali
Jadeecada oo `laga cirribtiray` meeshii ugu darneyd adduunka ee ay ka dillaacday
Play video Maxay tahay sababta uu boqorkan Soomaalida ah sidan ugu lebisto? from BBCMaxay tahay sababta uu boqorkan Soomaalida ah sidan ugu lebisto?
Play video Maxay tahay sababta uu boqorkan Soomaalida ah sidan ugu lebisto? from BBC
Video 30 minutes Video 30 minutes 30:00
Play video . from BBC.
Play video . from BBC
Ololaha doorashada oo maanta ka bilaabanaya Tanzania
Harry Maguire oo xukun xabsi ah lagu riday
Xubin sare oo Alshabaab ka tirsan oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya
Soomaaliya: Kiisaska xanuunka coronavirus oo hoos u dhacay
Telefoonno fayras wata oo lagu iibiyo suuqyada Afrika
Maxay tahay sheekada bukaan u dhintay Covid-19 oo la sheegay inuu `dib u soo noolaaday`?
Posted at 9:45 26 Agoosto 20209:45 26 Agoosto 2020
Muuqaal si aad la iskula wadaagay baraha bulshada ayaa waxaa laga arki karaa nin u dhashay Kenya oo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka Covid-19 oo `dib u soo noolaaday` xilli ay duugtiisa socotay.
Farriin la raaciyay muuqaalka oo la iskula wadaagay WhatsApp-ka ayaa u qorneyd sidan: “Ninkan waa la aasi rabay kaddibna naxashka ayaa gariiray, waxay go`aansadeen inay furaan, waxay ogaadeen in ninkan uu neefsanayo. Waxay ka bixiyeen Qalabka Difaaca Qofka ee PPE kaddibna isbitaalka ayay ula carareen. Ruwaayadda Covid-19.”
Balse sheekadaasi waa been abuur. Ninka la sheegay inuu soo noolaaday wuxuu ahaa bukaan xirnaa qalabka PPE oo qaraabo la ahaa ninka geeriyooday, kaas oo suuxay intii ay duugtu socotay.
Dadka u dhinta xanuunka Covid-19 waxaa lagu aasaa baco ee ma xirna qalabka PPE. Sidaas daraaddeed, ninka ka muuqda muuqaalka ma noqon karo kan la aasayay.
Ezra Kirui – oo u hadlay maamulka deegaanka Bomet oo ay ka dhacday arrintan ayaa BBC-da u sheegay in ninkaasi lagu xiray qalabka PPE si uu duugta uga qeyb galo.
Wuxuu intaas raaciyay in ninkan uu goor dambe soo roonaaday.
Muuqaalka ayaa si aad ah la iskula wadaagay barta Facebook.
Posted at 9:20 26 Agoosto 20209:20 26 Agoosto 2020
kumannaan telefoonnada Tecno ee W2 ayaa laga helay fayraskaImage caption: kumannaan telefoonnada Tecno ee W2 ayaa laga helay fayraska
Aalad fayras wadata ayaa laga helay kumannaan telefoonnada gacanta ah oo lagu iibiyo suuqyada Afrika.
Shirkadda Upstream ayaa ogaatay in aaladdan laga helay ilaa 53,000 oo telefoonnada shirkadda Tecno ah, kuwaas oo lagu iibiyo suuqyada Ethiopia, Cameroon, Masar, Ghana iyo Koofur Afrika.
Shirkadda soo saartay telefoonnadaas Transsion told Buzzfeed ayaa sheegtay in fayraskaas lagu xiray iyadoo aan ka war qabin.
Upstream ayaa sheegtay in fayraskaasi uu saameeyay dadka ugu nugul ee uu dakhligoodu hooseeyo.
Aaladdan fayraska oo lagu magacaabo Triada ayay shirkaddu ka heshay telefoonnada Android-ka, iyadoo dadka isticmaalana aysan ogeyn.
Aaladdan oo telefoonnada uga diwaan gashan magaca xHelper ayay dadka isticmaala ay ka iibsadaan adegyada internet-ka.
Guud ahaan, Upstream ayaa ogaatay in ilaa 200,000 oo telefoonnada gacanta ee Tecno ah laga helay aaladdan fayraska wadata.
Transsion Holdings waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Shiinaha ee sameeya telefoonnada, Afrikana waa shirkadda ugu sarreysay ee iibisa telefoonnada gacanta.
Shirkadda Tecno Mobile oo eedeyntaasi ka jawaabtay ayaa sheegtay in arrintaasi ay tahay wax hore oo la xalliyay.
Posted at 8:51 26 Agoosto 20208:51 26 Agoosto 2020
Mas`uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay inay yaraadeen kiisaska dadka qaada amaba u dhimanaya xanuunka coronavirus.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee uu sida ba`an u saameeyay xanuunka, iyadoo baaritaan ay BBC-du sameysay lagu ogaaday in tiro ka badan inta ay sheegtay dowladda ay u dhinteen coronavirus.
Dr. Maxamed Maxamuud Cali (Fuje) oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya ee hormuudka u ah la dagaallanka xanuunka ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo ay beryihii dambe aad u yaraadeen kiisaska xanuunka safmarka ah ee Covid-19, haddana uu jiro walaac ah in dib uu usoo laba kacleeyo maaddaama haatan ay furan yihiin duullimaadyada iyo iskuullada, isla markaana jaamacadaha la furi doono bisha soo socota.
“Mar dhow waxaan bilaabi doonnaa wacyigelin ballaaran oo aan dadka ugu sheegeyno inay nagu soo fool leedahay khatar,” ayuu yiri Dr. Fuje.
Wuxuu intaas ku daray inw asaaradda waxbarashada ay waddo dadaallo ardayda looga wacyigelinayo khatarta xanuunka coronavirus, sida inay ardaydu dhowrto kala fogaanshaha bulshada, xirashada maaskarada wejiga iyo joogteynta farxalka.
Posted at 8:05 26 Agoosto 20208:05 26 Agoosto 2020
Howlgal ay iska kaashadeen ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Taliska Ciidanka Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa duqeymo cirka ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe ku dilay xubin sare oo ka tirsanaa Alshabaab.
Sarreeye Guuto Miguel Castellanos, oo ah Taliye Xigeenka Howlgallada AFRICOM ayaa sheegay in duqeymahaas looga gol lahaa sugidda ammaanka iyo in lagu "wiiqo" howlgallada mustaqbalka ee Alshabaab.
AFRICOM ayaa sheegtay in duqeymahaasi aysan wax khasaare ah u geysan dad rayid ah.
Lama shaacin magaca ninkan la sheegay in lagu dilay duqeymahaas.
Posted at 7:42 26 Agoosto 20207:42 26 Agoosto 2020
Kabtanka kooxda Manchester United Harry Maguire ayaa lagu riday xukun xabsi ah oo dib loo dhigay kaa soo gaaraya 21 bilood iyo 10 maalmood, kaddib markii maxkamad lagu saaray jasiiradda Syros ee dalka Giriigga.
Weraryahankan u dhashay dalka Ingiriiska, ayaa lagu eedeeyay xadgudub jinsi, isku day laaluush, tacaddi uu kula kacay shaqaale iyo aflagaaddo kaddib markii lagu xiray Mykonos.
27-sano-jirkan ayaa kaddib markii shalay xukunka lagu riday wuxuu sheegay in kooxdiisa sharciga uu ku amray inay maxkamadda la socodsiiyaan inuu racfaan ka qaadanayo.
"Waxaan aad ugu kalsoonahay inaan beri ka nahay arrintan – haddii ay wax jiraan aniga, qoyskeyga iyo saaxiibbadey ayaa dhibbaneyaal ah," ayuu yiri.
Gelinkii dambe ee shalay, maamule Gareth Southgate ayaa Maguire ka saaray koox bisha soo socoda la cayaari doonta dalalka Iceland iyo Denmark.
Xukunka ayaa dib loo dhigay muddo saddex sano ah ah, sababo la xiriira inuu yahay dembigii ugu horreeyay ee uu galo iyo in eedeymuhu ay yihiin kuwo dhanka akhlaaqda la xiriira.
Maguire waxaa lala xiray walaalkiis Joe, oo 28 sano jir ah, iyo Christopher Sharman, oo 29 sano jir ah.
Joe Maguire iyo Sharman ayaa eedeymo kuwii hore la mid ah lagu soo oogay, waxaana labaduba lagu xukumay 13 bilood oo xabsi ah oo dib loo dhigay.
Dhammaan sadexdoodu way beeniyeen eedeymaha.
Harry Maguire kama uusan qeyb gelin xukunka maxkamadda ee Syros, balse aabbihiis ayaa goobjoog ka ahaa.
Posted at 6:53 26 Agoosto 20206:53 26 Agoosto 2020
Tanzania Electoral CommissionCopyright: Tanzania Electoral Commission
Xisbiga talada haya ee Tanzania ayaa xilka hayay tan iyo markii uu dalkaas xornimada ka qaatay BritainImage caption: Xisbiga talada haya ee Tanzania ayaa xilka hayay tan iyo markii uu dalkaas xornimada ka qaatay Britain
Ololaha doorashada ayaa maanta oo Arbaco ah ka bilaabanaya dalka Tanzania, iyadoo lagu wado in doorasho guud ay ka qabsoonto dhammaadka October.
Madaxweyne John Magufuli, oo doonaya in dib loo doorto, ayaa waxaa la tartami doona 14 musharrax.
Xisbiga talada haya ee CCM ayaa tobnaan sano saameyn ballaaran ku lahaa siyaasadda Tanzania. Mucaarad isbahaystay ayaa doorashadii hore aad ula loollamay xisbiga.
Balse musharraxiinta mucaaradka ee kala qoqoban ayaa sanadkan fursad weyn u noqon doonta madaxweynaha.
Mr Magufuli ayaa aad loogu ammaanay inuu yahay nin isbeddel wada markii uu xilka dalkaas qabtay shan sano kahor, balse waxaa tan iyo markaas loo soo jeediyay eedeymo badan.
Bishii June wuxuu si lagu muransan yahay ugu dhawaaqay in coronavirus laga cirribtiray Tanzania iyadoo la adeegsanayo ducooyin.
Inta badan dadka Tanzania ayaa tan iyo markaas dib u bilaabay ganacsigooda.
Doorashada sanadkan ayaa lagu wadaa inay noqoto mid loollan adag wadata.
Posted at 6:43 26 Agoosto 20206:43 26 Agoosto 2020
Ugu yaraan 18 milyan oo carruur ah ayaa la tallaalay sanadkii horeImage caption: Ugu yaraan 18 milyan oo carruur ah ayaa la tallaalay sanadkii hore
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo ayaa sheegtay in dilaacitaankii ugu ba`naa ee cudurka jadeecada oo dilay in ka badan 7,000 oo carruur haatan la soo afjaray.
Dadaallo lagu doonayay in lagu joojiyo faafitaanka jadeecada dalkaas ayaa waxaa carqaladeeyay adeegyada caafimaad oo aan wanaagsaneyn iyo sidoo kale colaado.
Khubarrada caafimaadka ayaa sheegay in tirada rasmiga ah ee dhimashada ka dhalatay jadeecada ay ka badan karto intaas, maaddaama aan kiisas badan la diwaan gelin.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa`id oo uu ku qabtay caasimadda dalkaas, Kinshasa, ayaa Wasiirka Caafimaadka, Eteni Longondo, wuxuu sheegay in jadeecadu aysan haatan ka jirin Congo.
Inkastoo weli aysan khubarrada caafimaadkuweli xaqiijin arrintan, haddana waxay ku soo aadeysaa kaddib markii olole tallaal oo ballaaran la fuliyay sanadkii hore, kaas oo lagu tallaalay ugu yaraan 18 milyan oo carruur ah.
Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo ayaa la daalaa dhacayay dillaacitaanka ajdeecada tobankii sano ee ugu dambeeyay, balse caabuqa ayaa aad u faafay bishii June ee sanadkii hore wuxuuna saameyn ballaaran ku yeeshay hannaanka caafimaad ee dalkaas ee liita.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa sanadkii hore la daalaa dhacayay la tacaalidda jadeecada, dabeysha, daacuunka, coronavirus, iyo Ebola.
Cudurka Jadeecada oo fara ba'an ku haya caalamka
Kiisaska cudurka Jadeecada ayaa sare u kacay saddaxdii bilood ee ugu horeysay sanadkan 2019.
'Xasuuqihii' loo haystay dembiyo ka dhacay Dr Congo oo ICC ay xukuntay
Bosco Ntaganda waa qofkii ugu horreeyay oo Maxkamadda Dembiyaha Caalamiga ah ee ICC ay ku heshay dembiyo la xiriira Adoonsi galmo.
Ma loo dhintaa coronavirus?
Qiyaasta hadda ee in boqolkiiba hal uu u dhinto fayraskan ma ahan arrin qof kastaa quseysa.
Coronavirus oo Masar gaadhay
Wasaarada caafimaadka Masar iyo hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa warbixin wada jir ah oo ay soo saareen ku shaaciyey in qofkii ugu horreeyey ee qaba cudurka Coronavirus laga helay dalka oo qofkaasina yahay qof ajnabi ah oo dalka yimid.